W3C yakaita WebAssembly muyero unokurudzirwa | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi wapera takagovana pano pane blog nezve iyo nhau dzekuti Mozilla, Fastly, Intel, uye Red Hat vaive vabatana kuti vavandudze iwo matekinoroji anogadzira WebAssembly (Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvenhau, unogona kuzvitarisa kubatana uku) Saka zvino mavhiki mashoma mushure memashoko iwayo Iyo W3C Consortium yakazivisa kuti tekinoroji WebAssembly rave iro rinokurudzirwa mwero.
Kune avo vasingazive neWebAs Assembly vanofanira kuziva izvozvo izvi zvinopa middleware pasi rose browser-yakazvimirira yakaderera-chikamu kumhanya kunyorera yakarongedzwa kubva kumitauro yakasiyana siyana yekuronga. WebAssembly yakaiswa seye inovimbisa uye inotakurika cross-browser tekinoroji yekuvaka yakakwira-inoshanda webhu kunyorera.
Webhu Musangano se inogona kushandiswa kugadzirisa mabasa anoda kuita kwepamusorosemuenzaniso, vhidhiyo encoding, kurira kurira, 3D magiraidhi uye manejimendi, kuvandudzwa kwemitambo, kushanda kwecryptographic, kuverenga masvomhu, uye kugadzirwa kweanogona kuitisa emitauro yemitauro.
Chinhu chakasarudzika yemuenzaniso wekuuraya wezvishandiso zvinoshandisa WASNdiri kuvhura mune sandbox nharaunda kuzviparadzanisa kubva kuhurongwa hukuru uye mashandisirwo enzira yekuchengetedza zvichibva pane manejimendi manejimendi, yezviito neimwe yega zviwanikwa (mafaera, madhairekitori, zvigadziko, mafoni kufona, nezvimwewo)
Nekugonesa JIT yeWebAsAssembly, iwe unogona kuzadzikisa matanho ekuita padhuze nekodhi kodhi. Pakati pemabasa makuru eWebAsAssembly ndiko kupihwa kwekutakurika, kufungidzira maitiro uye kuzivikanwa kwekuitwa kwekodhi pamapuratifomu akasiyana.
Munguva pfupi yapfuura, WebAssembly iri kufambira mberi seplatform kumhanya kodhi zvakachengeteka pane chero zvivakwa, sisitimu yekushandisa uye chishandiso, isina kuganhurirwa kune mabhurawuza.
W3C yakagadzirisa matatu maratidziro zvine chekuita neWebAs Assembly:
Webhu Assembly Core- Yakatsanangurwa seyepasi-chikamu chikamu muchina unonyatsoteedzera mashandiro emazhinji microprocessors yaanomhanya nayo. Pamwe kuburikidza nekuumbanidzwa kana Just-In-Nguva dudziro, iyo WebAssembly injini inogona kumhanya pane ingangoita kumhanya kwekodhi yakanyorwa yeplatform chikuva.
Chinhu .wasm yakafanana nefaira .class Java mupfungwa yekuti ine yakamomarara data uye zvikamu zvekodhi zvinoshanda pane iyo static data. Kusiyana neJava, WebAssembly inowanzo gadzirwa seyakaunganidzwa tarisiro yemimwe mitauro yekuronga seC / C ++ uye Rust.
Purogiramu inonzi WebAssembly Web: inotsanangura chirongwa chechirongwa chakanangana neiyo Chipikirwa mashandiro ekukumbira uye kuita ". wasm" zviwanikwa. Iyo WebAssembly sosi fomati yakagadziridzwa kutanga kuuraya pasina kumirira iyo faira kuti izere zvizere, ichivandudza kupindura kwemawebhu kunyorera.
Mune ramangwana, zvakarongwa kugadzirira kududzirwa kweWebAs Assembly mabasa akadai se:
Kuverenga kwakawanda kuverenga pamwe neyekuyeukwa ndangariro uye yeatomu memory yekuwana
Vector mashandiro akavakirwa paSIMD, iyo inobvumidza kuenzanisa kuitiswa kwemacircle.
Mareferensi emhando yekunongedzera kwakananga kuzvinhu zviri muWebAs Assembly kodhi.
Kugona kudaidza mabasa pasina kushandisa imwe nzvimbo pane stack.
Nzira yekushanda pamwe nemutori wemarara.
WASI (WebAssembly System Interface): API yekubatana kwakananga neiyo inoshanda system (POSIX API yekushanda nemafaira, zvigadziko, nezvimwewo).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » W3C yakaita WebAssembly muyero unokurudzirwa